येशूले ध्यान केन्द्रित | Apg29
तपाईं सामाजिक नीति, एजेन्डा 2030 र जलवायु मा बा
तपाईं फेरि येशू ख्रीष्ट को लागि लामो आउँछन् हुनेछ? पृथ्वीमा यहाँ आफ्नो मुटुको समस्याको मा अधिक केंद्रित छ कि जलवायु समस्या र एजेन्डा 2030?
हामीले विश्व हामी मान्छे फिक्री बस्ने हेर्न जहाँ आज बाँचिरहेका छौं। र जब म बाइबल पढ्न, यो भन्छन्:
"वर्ण सूर्य र चन्द्र र तारा आफूलाई देखाउन, र पृथ्वीमा राष्ट्रहरूले वेदनामा र perplexity हुनेछ गर्नुपर्छ; समुद्र र छालहरू मान्छे संसारको, स्वर्गको शक्तिहरु हल्लाइन्छ गरिनेछ आइपर्नेछन् के को अघिबाटै जान्ने काम मा डर संग सास फेर्न नसक्ने हुनेछ।। त्यसपछि तपाईं मानिसको पुत्र शक्ति र ठूलो महिमा संग बादलमा आउँदै। तर यो हुन थाल्छ, तपाईंको छुटकारा आउँदै छ लागि, त्यसपछि सीधा र आफ्नो टाउको उचाली हेर्नुपर्छ। " लूका 21: 25-28।
हामी, आज पूरा हाम्रो जलवायु भइरहेको छ के भन्दा फिक्री भएका मान्छे, र जहाँ हामी सुसमाचारको घोषणा गर्न सक्षम छन् एजेन्डा 2030 वा जलवायु नीतिको छैन। हामी वातावरण, एजेन्डा 2030, वा सामाजिक नीति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, तर हाम्रो ध्यान येशू ख्रीष्ट र उहाँका आ आफ्नो आँखा छ छ। तपाईं सामाजिक नीति, एजेन्डा 2030 र जलवायु मा बारेमा प्रचार के जीत?
मसीहीहरूको रूपमा हामीले संसारको बच्चाहरु रूपमा फिक्री ग्रस्त हुँदैन। मुख बोल्छ हृदय को प्रशस्त अक्सर बताए। तपाईँ फेरि येशू ख्रीष्ट को लागि लामो आउँछन् हुनेछ? पृथ्वीमा यहाँ आफ्नो मुटुको समस्याको मा अधिक केंद्रित छ कि जलवायु समस्या र एजेन्डा 2030? येशूले यसो भन्नुभयो:
"तर त्यो पासो रूपमा तिमीहरूमा अचानक दिन, निरन्तर जागा लागि यो सबै पृथ्वीमा बस्ने सबै प्रभावित हुनेछ। हुनुहोस् र सबै भाग्न बलको लागि प्रार्थना भनेर carousing, मतवालापन र जीवनको फिक्रीले आफ्नो हृदय वजन को सावधान रहन कि हुनेछ हुन र मानिसको पुत्र अघि खडा। "
बरु सामाजिक समस्या, जलवायु समस्या र यति मा कुरा को, हामीलाई स्वर्गको राज्य प्रचार गरौं। एक दिन येशू ख्रीष्टले फिर्ता आउन र आफ्नो साँचो दुलही प्राप्त तपाईं त्यो दिन लागि तयार छन् हुनेछ? वा तपाईंले एटिक्राईष्ट छ जो थप ध्यान छ कि यो छ?
म स्वर्गीय विवाहमा हुन लामो र मेरो ध्यान तपाईं येशू ख्रीष्टले आफ्ना दुलही छनोट हुनेछ जब दिन हुनेछु छ! उठ, त्यसैले राजा को येशू ख्रीष्ट राजा फेरि छिट्टै सुत्न जसले तपाईंलाई। यहाँ अन्त्यमा, पढ्न र चिन्तन गर्न केही बाइबल पदहरू।
2 Pettrusbrevet 3: 3-4 सबै माथि, तपाईं अन्तिम दिन scoffers मा सम्झना हुनेछ, आफ्नै इच्छा द्वारा निर्देशित र तपाईं जो नकली र सोध्छन्: "के आफ्नो आउँदै को प्रतिज्ञा बारेमा? हाम्रो पुर्खाहरूले पहिले नै मृत्यु, र यो संसारको सृष्टि देखि भएको छ रूपमा सबै छ। "
1 थिस्सलोनिकी 5: 2-3 लागि प्रभुको दिन रात चोर रूपमा आउँछ धेरै राम्रो भनेर थाह छ। बस जब मान्छे त प्रकोप रूपमा अचानक श्रम दुखाइ रूपमा एक महिला जन्म दिन हुनेछ जब, र तिनीहरूले उम्कन पर्छ "सबै कुरा शान्तिपूर्ण र सुरक्षित छ", भन्छन्।
मत्ती 24: 29-30 तुरुन्त पछि ती दिन को कष्ट सूर्य darkened गरिनेछ, र चन्द्र यसको प्रकाश दिन छैन। ताराहरू आकाशबाट पतन हुनेछ र स्वर्गको शक्तिहरु हल्लाइन्छ हुन। त्यसपछि मानिसको पुत्र वर्ण पृथ्वीको सबै कुल शोक पर्छ आकाश देखा पर्छ, र त्यसपछि, र तिनीहरूले मानिसको शक्ति र ठूलो महिमा संग स्वर्गमा को बादल मा आ पुत्र देख्नेछन्।
2 तिमोथी 3: 1-5 यो ठेगाना पनि, कि आखिरी दिनमा, समय गाह्रो छ। त्यसपछि मानिसहरू मात्र आफू र पैसा विचार गर्नेछ; तिनीहरूले पूर्ण, प्रेम, क्षमा नदिने बिना, आमाबाबु गुन नमान्ने, दुष्ट गर्न, सेखी घमण्डी, अशिष्ट, अनाज्ञाकारी बन्न, slanderous अनियन्त्रित, क्रूर, छैन लागि, राम्रो छली, लापरवाह र दम्भी। तिनीहरूले मोजमस्ती परमेश्वरको भन्दा बढी माया गर्छु। तिनीहरूले एक मास्क रूपमा piety तर यसको इन्कार बोक्न। तिनीहरूलाई टाढा रहनुहोस्।
दानियल 12:4तर तपाईं दानियलले शब्दहरू राख्न र अन्त पटक सम्म पुस्तक मुहर पर्छ। धेरै हुनेछ, र ज्ञान वृद्धि गर्नेछु। "
लूका 21: 25-26 सूर्य र चन्द्र र ताराहरूमा चिन्हहरू हुनेछ, र पृथ्वी अन्यजातिहरूको वेदनामा र perplexity हुनेछ; समुद्र र छालहरू गर्जन। मान्छे स्वर्गको शक्तिहरु हल्लाइन्छ गरिनेछ लागि, विश्व मा आउँदै छ के को अघिबाटै जान्ने काम मा डर को मर्नेछन्।
मत्ती 24: 42-44 वाच त्यसैले, तिमीहरूले लागि के घण्टा आफ्नो प्रभु आउन doth थाहा छ। तपाईं घर मालिकले चोर आयो रात को के समयमा थाह भने, उहाँले जागा रहन भनेर बुझ्न र घर बिच्छेद उहाँलाई राख्नेछ। त्यसैले तपाईं पनि किनभने तपाईं कम से कम यो जब मानिसको छोरा आउँछ आशा गर्दा, तयार।
मत्ती 24: 23-24 तिमीहरू भन्नुभयो भने छन्: तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, वा त्यहाँ; छैन यो विश्वास! झूटा saviors र झूटा अगमवक्ताहरू ठूलो संकेत प्रदर्शन र धेरै चुन्नु यदि सम्भव छ भने, बहकाउन चमत्कार हुनेछ।
1 यूहन्ना 2:18 मेरो छोराछोरी, यो अन्तिम समय छ। तपाईं एटिक्राईष्ट, आउनुहोस् पनि अब धेरै antichrists आएका छन् पर्छ भनेर सुनेको छु। यो हामी यसलाई अन्तिम समय हो भनेर बुझ्न।
यो एक पाठक इमेल छ, विचार को लागि खडा गर्न लेखक प्राप्त।